चौरजहारी साँस्कृतिक महोत्सव स्थगित
मंगलबार, वैशाख २८, २०७८ ०६:२६:३७
चौरजहारी साँस्कृतिक महोत्सव स्थगित काेराेना भाइरसकाे जाेखिमलाई मध्यनजर गर्दै महाेत्सव स्थगित गरिएकाे आयोजकको भनाई ।
शुक्रबार, वैशाख ३, २०७८ कखरा संवाददाता
चाैरजहारी साँस्कृतिक महाेत्सवमा प्रस्तुति राख्दै कलाकार ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा आयोजित वृहत दोस्रो साँस्कृतिक महोत्सव स्थगित भएको छ । बढ्दो कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण आजबाट महोत्सव स्थगित गरिएको हो । गत चैत्र २६ गतेबाट सुरु भएको महोत्सव ८ औं दिनमा स्थगित भएको हो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महोत्सव बैशाख ५ गतेसम्म संचालन हुनु पर्ने थियो । तर दिन प्रति दिन कोरोना भाईरसका संक्रमितहरु थपिदै गएपछि जोखिमलाई ध्यानमा राखेर महोत्सव स्थगित गरिएको महोत्सवका साँस्कृतिक संयोजक एल.वि. कटुवालले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोनाको जोखिम थप बढ्न सक्ने तर्फ सचेत रहदै महोत्सव स्थगित गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाई छ । चौरजहारी उद्योग वाणिज्य संघ र चौरजहारी नगर संगित समितिले संयुक्त रुपमा महोत्सव आयोजना गरेका हुन् । महोत्सवमा पूर्णकला विसी, भुमिका गिरी, बद्री पंगेनि, यश कुमार, मिस्टर आर.जे. लगायतका कलाकारहरुले प्रस्तुति राखेको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवमा आशा गरिए अनुसार दर्शकहरु समेत नआएको आयोजकको भनाई छ ।
करिब १०, ११ हजार जति दर्शकले मात्र महोत्सव अवलोकण गरेको आयोजकको अनुमान छ । कोरोनाका डरले महोत्सवमा दर्शकहरुको उत्साह जनक उपस्थिति हुन नसकेको अनुमान गरिएको छ । यो महोत्सव गत वर्ष नै आयोजना गरिएपनि कोरोना भाईरसकै कारण स्थगित भएको थियो । गत वर्षको चैत्र १२ गते देखि महोत्सव उद्घाटन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी गरिएपनि सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरेपछि महोत्सव स्थगित भएको थियो । यो वर्ष पनि महोत्सव विचमै स्थगित हुन पुगेको छ । जसका कारण ठुलो घाटा व्यहोर्नु परेको आयोजकको भनाई छ । खर्च विवरण भने केहि दिनमा निस्कने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३, २०७८, १४:११:००
फ्लोर क्रस गरेको चौका दाउ शनिबार, वैशाख ४, २०७८
चौरजहारी महोत्सवमा पल शाह देखि सचिन परियारको प्रस्तुति रहने आइतबार, चैत २२, २०७७
नयाँ लोकदोहोरी गीत ‘चौका दाउ’ सार्वजनिक (भिडियो सहित...) शनिबार, फागुन २२, २०७७
रुखले घामै छेकेर सार्वजनिक.... (भिडियाे सहित) शनिबार, पुस १८, २०७७
समन्वय प्रमुखका विकासवादी गीत सार्वजनिक बिहीबार, पुस २, २०७७